သက်ဝေ: နောက်ဆုံးစကား (သို့) မေမေ
ကြည် November 24, 2009 at 1:02 PM
သက်ဝေ November 24, 2009 at 1:09 PM
ကြည်... ကြည်... ကြည်...
ကြည့် ဘလော့ဂ်မှာ CBox မရှိ
Comment လဲ ရေးလို့မရအောင် ပိတ်ထား...
တဖက်သတ်နဲ့ ကိုယ့်ကို ချန်ထားသွား...
အဆက်အသွယ် တခုခုပြုပါ ကြည်...
Profile မှာ ကိုယ့် မေးလ်ရှိပါတယ်...။
Vista November 24, 2009 at 1:28 PM
Nge Naing November 24, 2009 at 3:06 PM
ကျွန်မက တော်ရုံတန်ရုံ အာမေတိတ်ဆို ဘုရားဘုရားလို့ ဘုရားပဲ တမိတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အလန့်တကြား ဖြစ်ရင် ဘာကြောင့်ရယ်မသိ ဘုရားမတမိပဲ အမေပဲ တဖြစ်တယ်။
မီယာ November 24, 2009 at 3:06 PM
ရင်ထဲက တကယ် ခံစားနေရတုန်း ရေးထားတာမို့ ဖတ်လို့ ပို အသက်ဝင် နေပါတယ် မသက်ဝေ
နားဝင်ချိုလိုက်တာ။ အားရှိလိုက်တာ။ လွမ်းလိုက်တာ။
i want to call may may these days.
I ve no chance to call my mum since i was7yrs.
ချစ်ကြည်အေး November 24, 2009 at 7:30 PM
အပြုံးပန်း November 24, 2009 at 9:12 PM
Hmoo November 24, 2009 at 9:28 PM
သင်းနွယ်ဇင် November 24, 2009 at 9:30 PM
သူလဲ"မေမေ"လို့အော်နေတယ်ပေါ့။ ဒီမှာလဲ"မေမေ"ပြန်သွားလို့ ဟီး..အော်နေရတယ်။
Kay November 24, 2009 at 10:00 PM
စာလိုလို ကဗျာလိုလို.. အိမ်မက်လိုလို.. ဘာလိုလို လား..
ကိုလူထွေး November 25, 2009 at 3:52 AM
ဒီလောက်အကျယ်ကြီးခေါ်မှတော့ အမေလည်း ကြားမိမှာပါလေ...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း November 25, 2009 at 7:06 AM